RASMI: Messi oo markale ku laabtay xulka qaranka Argentina – Gool FM
RASMI: Messi oo markale ku laabtay xulka qaranka Argentina
(Argantina) 07 Maarso 2019. Macalinka xulka qaranka Argantina ee Lionel Scaloni ayaa ku dhawaaqay in Messi uu ku soo laabtay liiska xidigaha xulka Tango ee ka qeybgalaya kulamada saaxiibtinimo ee Venezuela iyo Morocco.
Kabtanka kooxda Barcelona ayaa ka maqnaa xulka qaranka Argantina tan iyo koobka aduunka 2018 ee lagu qabtay dalka Russia, kaasoo ay ku guuleysteen wiilasha Faransiiska.
Messi ayaa dib ugu soo laabtay markale xirashada maaliyada xulka qaranka Argantina kadib mudo dhan 9 bilood ah, si uu qeyb kaga noqdo kulanka saaxiibtinimo ee Venezuela kaasoo la ciyaari doono 22-ka bishan Maarso.
Kadib waxaa u xigi doono kulanka Morocco ay wada ciyaari doonaan 26-ka isla bishan, si ay ugu diyaar garoobaan tartanka Copa America ee la qaban doono xagaagan.
Xidigaha Sergio Aguero iyo Gonzalo Higuain ayaa ka maqan liiska xidigaha xulka qaranka Argantina ka dib markii ay ka fariisteen ciyaaraha caalamiga ah.
Waxaa sidoo kale liiska ka maqan Mauro Icardi, kadib markii uu khilaaf xoogan soo kala dhex galay isaga iyo maamulka kooxda Inter Milan.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Rennes Vs Arsenal
RASMI: Roma oo ku dhawaaqday inay kansashay heshiiska tababaraha kooxdeeda ee Di Francesco